Hey’adda UNHCR oo sheegtay in beesha caalamku ay ku guuldaraysteen maalgashiga Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Hey’adda UNHCR oo sheegtay in beesha caalamku ay ku guuldaraysteen maalgashiga Soomaaliya
Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobay u Qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi ayaa sheegay in beesha caalamku ay ku guuldarraysatay inay maalgelin ka samayso Soomaaliya, si fursad loo siiyo qaxootiga ku soo laabanaya waddanka.
Flippo ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu shalay booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dhadaab. isagoo soo indha indheeyay xaaladda qaxootiga Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane C/salaan Hadliye ayaa sheegay in madaxa hey’adda UNHCR ay kala hadleen sidii ay xuquuqdooda u heli lahaayeen qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerada qaxootiga Dhadhaab.
Taliska booliska degmada Waabari oo Kaamirooyinka qarsoon galinayo wadada Maka al-Mukarama. Maqal